बाबुरामलाई खुला पत्रः संसारकै अग्लो चुचुरो भन्दैमा दिल्लीबाट सगरमाथा देखिँदैन !
असोज २९, २०७४
आदरणीय बाबुराम भट्टराई ज्यु,
तपाई राजनीतिको केन्द्रमा नभए पनि मिडियाहरुको केन्द्रमा हमेसा बसिरहनु हुन्छ । आलोचनालाई बाल नदिने र आफ्नो तरिकाले अघि बढ्ने, भए सबै ठीक, नत्र सबै बेठीक भन्ने धेरै नेताहरुमध्ये तपाईं पहिलो नम्बरमा पर्नुहुन्छ ।
तपाईंलाई अब के गर्नुपर्ला भनेर सुझाव दिन यो पत्र लेखिएको होइन । किन भने, एक लाख कार्यकर्ता जम्मा गरेर दियो माथी हात राखेर खाएको कसम दुई वर्षमै भताभुङ्ग बनाउने व्यक्तिले आम जनताको सुझाव र सल्लाह सुन्लान् भनेर आशा राख्नु मूर्खतापूर्ण काम हो भन्ने यो पंक्तिकारले राम्रोसंग बुझेको छ ।
यद्यपि त्यतिबेला खाएको कसमसँग पंक्तिकार भनौं या अन्य लाखौं जनता र शुभचिन्तकहरु खुसी चाहिँ थिएनन् । संविधान बनेपछी त्यसलाई निश्चित आकारमा ढाल्नुपर्ने बेलामा संसदको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ शक्तिको रटान लगाउने पहिलो कदम नै प्रत्युत्पादक थियो तपाईंका लागि । दोश्रो चाहिँ, तपाईलाई निरन्तर लागिरहने भारतीय खुफिया एजेन्सीको सदस्य भएको आरोपको खण्डन नगरी जसरी लतारिरहनु भयो त्यो घातक बन्यो ।
आम शंका उपशंका निवारण गर्नुपर्ने काम तपाइँको थियो, तर पंक्तिकार के कुरामा बिश्वस्त छ भने, तपाईंको पहिलाको पार्टीभित्र जबरजस्त दुई लाइन संघर्ष चल्दा मोहन वैद्य, रामबहादुर थापाहरुले पूर्वाग्रह पूर्ण रूपमा भनेका ‘भारतीय दलाल’ भन्ने शब्दलाई अहिले म्याग्निफाई गरेर ‘भारतीय एजेन्ट’ भन्न शुरु गरिएको हुनुपर्छ । त्यो बाहेक अन्य कुनै लेनदेन भएको भए, गुह्य कुरा चाहिँ या त तपाईंलाई थाहा होला, या त तपाइँको राजनीतिक गुरु एसडी मुनीलाई थाहा होला ।
मैले बारम्बार भन्दै आईरहेको कुरा के हो त भन्दा बाबुराम जी, तपाईं एक कुशल प्रसाशक हो, कुशल शासक होइन । तपाईंलाई बनाईएको माटो मै शासन गर्ने कला थपिएको छैन । अहिले त घैंटो बनिसक्नु भयो, फुटालेर जतिसुकै उम्लेको पानीमा खन्याएर जाँतोमाथी राखेर घुमाए पनि आकार प्रकार परिवर्तन हुन सक्ला तर त्यसको गुण कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्दैन । उतिखेरै चर्किएर काम नलाग्ने हुने सम्भावना त छँदैछ ।
बाम गठबन्धनमा तपाई पनि सामेल हुनुभएको कुराले केही संशयसहित नै सहि, पंक्तिकारलाई केही खुसी लागेको थियो । लाग्थ्यो, तपाईंको राजनीतिक फिर्ती सवारी भयो । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने, जुन रुपमा तपाईंले भूमिका खोजिरहनु भएको छ, सानो दलबलको नेतृत्व गरेर छोटे भए पनि राजा नै बन्नुपर्ने, त्यसमा तपाइँको योग्यता र ब्याक्तित्व दुइवटै पुग्दैन ।
गोर्खाबाट चुनाव लड्न नदिएर तपाईंलाई काठमाडौंमा ल्याउने प्रपन्च चलिरहेको जस्तो देखियो । काठमाडौं तपाईको आफ्नो कहिल्यै भएन किनकी कहिले सडक फराकिलो पार्छु भन्दै डोजर लिएर हिँड्नु भयो, त्यति मात्रले नपुगेर बागमतीका सुकुम्बासी माथी पनि डोजर चलाईदिनु भयो । तपाईले डोजर चलाएको काठमाडौं कसरी तपाइँको हुन सक्थ्यो ? गोर्खाबाट चुनाव लड्न नदिने निर्णय एकातिर आफैमा गठबन्धनको नैतिकता बिरुद्ध त थियो थियो तर त्यो भन्दा बढी नैतिक संकट त तपाईंले रातारात निर्णय गरेर गठबन्धनमा हातेमालो गर्न जानुले निम्त्याएको थियो । अनि अर्को आफ्नो एउटा सीटको बार्गेनिङमा हठात् गठबन्धन छोड्नुमा देखाएको तपाईको अधैर्यताले पुष्टि गर्दछ । खासमा भन्ने हो भने, तपाईंको ब्याक्तित्व नै नैतिक संकटको उपज हो ।
बाबुराम जी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग राखेर तत्कालीन माओवादीले संबिधानका कैयौं धाराहरुमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा ताका तपाईं एउटा शक्तिशाली पोर्टफोलियोमा हुनुहुन्थ्यो । संविधान बनिसके पछि देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको थिएन, जसरी नयाँ चरणमा नयाँ शक्ति निर्णायक हुन्छ भन्दै तपाईं बाहिरिनु भएको थियो, त्यसरी देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेकै थिएन । तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने हो, नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दा देशको ब्यबस्थापन गर्ने टीम नयाँ हुनुपर्थ्यो । पुरानो रक्सीलाई नयाँ ब्रान्डको लेवल लगाइदिएर नयाँ भन्ने धृष्टता जसरी तपाईंले गर्नुभो, तपाईं त्यसको गुनेगार त हुनै पर्छ । होइन भने दुई वर्ष पछि लुरु लुरु पुरानै बिरासत बोकेका भनिएका ‘साँढे’ पार्टीहरुको जुधाईमा ‘बाच्छो’ बनेर मिचिन जानुहुन्थेन तपाईं ।
तपाईंले ट्वीटरमा आफ्नो आँखा खुलेको भनेर लेख्नुभएको रहेछ । अब मलाई र पाठकहरुलाई भन्दिनुस कि, त्यत्रो युद्ध, आर्थिक क्षति, १७ हजारको बलिदानीको तपाईंले आँखा चिम्म गरेर नेतृत्व गर्नुभएको थियो ? १४० शब्दमा सबैलाई होच्याउने किन ?
पश्चिमतिरको एउटा कुनै कार्यक्रममा तपाईले माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्डलाई खर्बौं घोटाला गरेको भनेर भाषण गरेको भिडियो अहिले पनि सामाजिक संजालमा छ्यापछ्याप्ती पाईन्छ । मैले त्यो गलत हो भनेर प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको सहानुभूति लुट्नु छैन तर सहि हो भने त्यो दिन वाम गठबन्धनको नाउँमा प्रचण्ड्को हात समातेर किन जुरुक्क उचाल्नुभएको ? कि तपाईंको हातले प्रचण्डको हात पनि शुद्ध पारिदियो ?
हजारौं सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले धेरै नपढेकोमा आफुलाई भाग्यमानी ठान्छन, पढेको भए ‘बाबुराम’ बनिने डर रैछ भन्छन् । यो कुरा सुन्दा हास्यास्पद लाग्ला, तर यसको अर्थ कति गहन छ भनेर तपाईंले घोत्लिएर पत्ता लगाएको दिन, तपाईं पुनः हिरो बन्नुहुने छ ।
तमाम पार्टीहरु एक भैरहेका छन्, ध्रुवीकरण तीव्र छ । सहि छ या गलत भन्ने कुरालाई निर्क्योल गर्न इतिहासलाई जिम्मा दिउँ, तर तपाईंले एकता गर्ने भनिएको कुनै पनि ध्रुवीकरणको हिस्सा तपाईं हुनै नसक्ने कारण के हो ? तपाईंले नेपालको राजनीति नबुझेको कि, राजनीतिले तपाईंलाई प्रयोग गर्न खोजेको भुमिकाको तालमेल नमिलेको हो ? खासमा अहिले चर्चा चलिरहेको वाम र लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणमा तपाईंको कित्ता कतापट्टि हो स्पष्ट पार्नुपर्ने जरुरी छ ।
आदरणीय भट्टराई ज्यु,
बैकल्पिक राजनीतिलाई बुझ्न र पचाउन सक्ने इन्द्रियहरुको बिकास अहिलेका प्रायः सबै युवाहरुमा भैसकेको छ । पुरानाहरुबाट पार लाग्दैन भन्ने कुरा पनि साँचो हो । तर बिचारलाई पुरानो भन्नेहरुले मान्छेलाई पुरानो नदेख्नु चाहिँ अहिलेको रोग नै हो । त्यो हटेको दिन, पुरानाहरु हट्छन, त्यसको लिस्टमा तपाईं पनि निसंकोच पर्नुहुनेछ ।
म तपाईंलाई कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा कसैको एजेन्ट भनेर बिल्ला लगाइदिएर वाहवाही बटुल्न चाहन्न । नेपालमा बिकसित हुने हरेक घटनाक्रमहरुको जिम्मेवारी स्वयं नेपाली नेताहरु नै लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने आम नेपाली हुँ । यद्यपि राजनीतिक स्वार्थ टिकाइराख्न भौगोलिक छिमेकी र आकाशे छिमेकी गुहार्ने प्रचलन छँदैछ । राजनीति गर्नेहरुले बिस्तारवाद, साम्राज्यवाद जे जे भनेर पुकारे पनि, हामीजस्ता आम नागरिकले हस्तक्षेप भनेर बुझ्छौं । यदि तपाईंलाई लागेको एजेन्टको आरोप सही छैन भने, तपाईले गर्ने खण्डन किन कतै भेटिन्नन ? यहाँ समृद्धि समृद्धि भनेर एकोहोरो रटान लगाएर मात्र हुँदैन डाक्टर साहेब, राष्ट्रिय स्वार्थसहितको समृद्धि चाहिएको छ । हामी भोकै बस्न सक्ने तर स्वाधीनता बेचेर रोटी किन्न नसक्ने जनता पर्यौं ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा तपार्इंको अडानहरुले बारम्बार फेल खाए । समानता, न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना, समावेशी लोकतन्त्र, समृद्धि जस्ता तपाईंका नाराहरु वास्तविक रुपमा लागू हुन सम्भव छन् तर गलत राजनीतिक संस्कार र धरातलको पृष्ठभूमिमा होइन । सहमत भए सबै राम्रा, असहमत भए सबै नराम्रा भन्ने तपार्इंको राजनीतिक थ्योरी घातक थ्योरी हो । केही दिनदेखी सामाजिक संजालमा देखिइरहेको छ, तपाईको हरेक कदमलाई नयाँ र महत्वपूर्ण भनेर छारो हाल्दै सकसपूर्ण जीवन यापन गरिरहेका अनुचरहरुको माया लागेर आउँछ । बिज्ञान बिषय पढेको नाताले म पनि यति कुरा भन्न चाहन्छु कि, लम्बाई चौडाई र उचाई जस्तै चौथो आयाम पनि हुन्छ ब्राह्मण्डमा, त्यसलाई ‘समय’ भनिन्छ । अग्लो भयो भन्दैमा दिल्लीबाट सगरमाथा देखिँदैन र सगरमाथाको चुचुरोबाट चन्द्रमा छिटो पुग्न पनि सकिँदैन ।
भट्टराई ज्यु, तपाईं समृद्धिको नयाँ लडाई लड्नुस, नयाँ सोच र सिद्धान्तको लडाइँ लड्नुस् हाम्रो कहिँ नियमापत्ती छैन । चाहे गोर्खाबाट लड्नुस्, चाहे काठमाडौबाट लड्नुस् । तर नयाँको नाममा पुरानो र मक्किएको राजनीतिक स्वार्थ लिएर नलड्नुस् । केही दलबलसहित छोटेराजा बन्ने सपनाबाट माथि उठ्नुस । मेरो शुभकामना छ ।
असोज २९, २०७४ मा प्रकाशित
करेन्ट लागेर विद्युत् प्राधिकरणकै कर्मचारीको मृत्यु भीमदत्तनगर – कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सव–स्टेशनमा करेन्ट लागेर आज बिहान एक कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका...
राजस्व सचिव फेरिए, ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर घिमिरेलाई जिम्मेवारी
महासमिति बैठकको बन्द सत्र शुरू, तीनवटा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै
जनतासँग गरिएका वाचा र खाएका कसम पूरा गर्ने चरण शुरू भयो : मन्त्री अर्याल
हङकङको गरीब बस्तीमा पैसा बर्सिएपछि... (भिडियो)
चीनको कोइलाखानीमा दुर्घटना हुँदा सातजनाको मृत्यु